Home News maxeey tahay sababta dowladu ugu kala hiilisay beelaha ku dagaalamaya gobolada dalka...
maxeey tahay sababta dowladu ugu kala hiilisay beelaha ku dagaalamaya gobolada dalka qaarkood
Dagaal dhaliyay qasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay deegaano hoos tago degmada maxaas ee gobolka Hiiraan kaasi oo u dhaxeeyay labo Maleeshiyo beeleed,waxaana soo kala gaaray qasaaro leh dhimasho iyo dhaawc.
labada maleeshiyo beeleed ayaa isku diriray dhul daaqsimed iyo ceelal biyoodyo sida aan warka ku helnay,dagaalkaasi kaligiis ayaa lagusoo waramayaa in uu hakaday,waloow ay suuragal tahay in uu dib ka bilaawdo.
Dagaal kaas la mid ah ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka kaxandhaale ee xadka dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya isna waxaa uu dhaliyay qasaaro leh dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac.
Dad badan ayaa qaba in dagaalka ka dhacay kaxandhaale ay gadaal ka riixayeen xildhibaano ka tirsan aqalka hoose kuwaasi oo kasoo jeedo mid ka mid ah beelaha dagaalamay,taas ayaa sababtay in uu xoogeeysto.
Sidoo kale waxaa jira tuhun soo baxaya oo sheegaya in ciidamo itoobiyaan ah ay ka barbar dagaalameen beelaha midkood,arinkaasi oo aan wali si cad loo sheecin,balse saraakiil itoobiyaan ah ayaa lagusoo bandhigay gelinsoor.
Dowlada Federaalka ah ee soomaaliya oo aan maalin xitaa ka hadlin dagaalkii ka dhacay gobolka hiiran gaar ahaan maxaas waxaa ay iyadoo aan eegin dhiigga wali ku daadanaaya Banyaaleey iyo deeganada u dhaw wafdi u dirtay Kaxandhaale arintaani waxaa la saaray calaamad su’aal,sida ay inoo sheegeen qaar ka mid ah nabadoono nala hadlay.
Eedeeyn xoogan ayaa dowlada loogu jeediyay dagaal beeleedyadii dhacay todobaadyadii lasoo dhaafay taasi oo ah in ay kor-joogto ka tahay waxyaabah dhacaya,oo aysan ka run aheeyn neceeybka dagaal beeleedyadda.
dadka qaar ayaa qaba in ay wanaagsanan laheed in Maxaas-na loo diro wafdi Kaxandhaalana loo diro mid kale,balse ma aheeyn in Kaxandhaale oo dowlada lagu xaglinaayo in si deg deg ah xubno dowlada ah loogu diro.
Sidaan oo kale dhowr jeer ayeey u dhaceen dagaal beeleedyo balse qaabka markaan loo wajahay hab ka wanaagsan ayaa loo xalin jiray